A Clear Shot (2019) – Gold Channel Movies
May. 01, 2020USA83 Min.PG
ဗီယက်နမ်ကနေပြောင်းလာပီး ယူအက်စ်မှာပြောင်းရွေ့နေထိုင်တဲ့ ကျောင်းသား ၄ ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကြောင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကို ဓားပြတိုက်ခဲ့ကြရာက စတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။ အဲ့ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ စုံထောက်အရာရှိ ဂိုမေ့စ်ဟာ ဂလက်စ်မန်းရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ဓားပြမှုကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော်သလို ဓားစာခံနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာလဲ စံပြပဲ။
ဓားပြတိုက်သူတွေဖြစ်တဲ့ လောင်း ၊ လွိုင် ၊ ပမ် နဲ့ ချုံ ဟာ စတိုးဆိုင်ထဲက လူတွေအားလုံးကို ဖမ်းထားလိုက်တယ်။စုံထောက် ဂိုမေ့စ်ဟာ ဓားပြတွေရဲ့နောက်ကြောင်းကိုလိုက်ရင်း သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ ၊ သူတို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို စုံ‌စမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ဂိုမေ့စ်ဟာ ဓားပြခေါင်းဆောင် လောင်းနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတွေညှိနှိုင်းကြလဲ ၊ အပေးအယူအနေနဲ့ ဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့လဲ ၊ ဓားစာခံတွေရဲ့ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ ၊ လောင်း နဲ့ သူ့ညီအစ်ကိုကြားက ဆက်ဆံရေး ဘာကြောင့်တင်းမာခဲ့ရတာလဲ …. စတာ‌တွေကိုသိရှိရမှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူဟာ ဘယ်သူ့ကိုအနိုင်ရခဲ့ပီးတော့ ဘယ်သူဟာ ဘာတွေကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရလဲ ဆိုတာကိုတော့ ……. ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင့်။
ဒီကားလေးဟာ စွန့်စားမှုပေါင်းများစွာပါဝင်ပီး လူ့လောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ရဲတွေက နည်းဗျူဟာကိုသုံးပီး အကွက်ကျကျဘယ်လိုစီစဉ်ခဲ့လဲဆိုတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Translated & Review by May Thin Kyu
Size – 910MB / 260MB
Download လုပ်ရတာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Application လေးကို အောက်မှာပေးထားတဲ့ Gold Channel Entertainment Page ရဲ့ Messenger မှာ Application Download Link , Username နဲ့ Password တို့ကို လာတောင်းလို့ရပါတယ်နော်
Original title A Clear Shot
IMDb Rating 4.5 85 votes
Download Racaty SD ျမန္မာ 260MB2weeks gcmovies
Download Megaup SD ျမန္မာ 260MB2weeks gcmovies
Download Mega SD ျမန္မာ 260MB2weeks gcmovies
Download GDrive SD ျမန္မာ 260MB2weeks gcmovies
Download Mediafire SD ျမန္မာ 260MB2weeks gcmovies